EX - ABSDF: နိုင်ငံရေးနဲ့ လူလိမ္မာ …..
Bo K Nyein March 6, 2014 at 7:08pm
အထူးသဖြင့်….၄၈လို ..ဒီမိုကရေစီ ..စပ်ကူးမက်ကူးကာလမှာ….အဆိုးဆုံးပေါ့….
ဒီလိုအချိန်မှာ…Ruleof Law လို့အော်နေရင်….. မာလကီးယားသွားမှာပေါ့…
FactionalPolitics …နဲ့ …Power Politics ကိုနားမလည်တဲ့….
လူလေး ၅၀၀လောက်ရှိတဲ့ တောထဲမှာတောင်…..
အမေရိကားမှာMonday Quarterback လို့ခေါ်တယ်
Sunday မှာပွဲပြီးမှ..ထိုင်ဝေဖန်တတ်တဲ့ ..လေပေါတွေကိုပြောတာပါ…..
TransitionPeriod ဟာ အထိန်းရအခက်ဆုံးပဲ
ဒါfactional Politics မှာ လက်နက်ပါလာလို့
Law andOrder Established မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ..အဆိုးဆုံး….
ယနေ့ဒေါ်စု…နိုင်ငံရေး…နဲ့ ၁၉၄၈ နိုင်ငံရေး….
Comments on capitalism
Tint Oo · Friends with MahnKoko and 1 other
အင်းအန်ကယ်ကတော့ဘာကြောင့် ဒီစကားလုံးတွေ ထည့်သုံးလဲဆိုတာ ( နောက်ခံတော့ ရှိမှာပေါ့လေ ။ )နားမလည်ပါဘူး ။အန်ကယ့် စာကို ဖတ်ပြီး အသည်းနာသွားပုံရတဲ့ဟို ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ (သူ့ လဲ ကျွန်တော် မသိပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ လေကတော့ ရိုးမလေဘဲ ) ကလေးချင်း ရန်ဖြစ်တာ အဖေပါ ခွဆဲ တဲ့ အပေါက်ချိုးသွားတာ သတိထားမိပါရဲ့။ကျွန်တော် ဒီကိစ္စလေးကို အန်ကယ် နဲ့ဆွေးနွေးချင်နေတာ ကြာပြီ ။ လက်က မရေးဖြစ်တာ နဲ့ ။ ကျွန်တော် ထင်တယ် ဒီဘက်ခေတ်ပေါ့နော် လွတ်လပ်ေ၇းနောက်ပိုင်း စကားပြောရ၈်ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့အကြောင်းကို လူ သိတော်တော် နဲတယ်လို့မြင်မိပါတယ်ိ ။ခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေ ၊ တပ် ရဲ့ အခန်း တို့ခုထိ တပ် နဲ့နိုင်ဂွမ်ယေး သမား နဲ့ ၊ ဒေါ်စု ထောက်ခံသူ နဲ့လက်တွေ့ သမားတွေကြားမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ ထဲမှာ ၁၉၄၈၀န်းကျင်က အစာ မကြေတာတွေ က အရေးကြီးတဲ့အခန်းကပါနေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ် ။
Tint Oo · Friendswith Mahn Kokoand 1 other
ကျွန်တော်မြင်နေတာက၄၈မှာ ဖဆပလ အစိုးရ ဟာ အင်္ဂလိပ်က ချိုးထားတဲ့ဖဲကို လက်သည် ၀င်ကိုင်ရတာပါ ။ဒါ့အပြင် အင်္ဂလိပ်က ထည့်တွက်မထား ခဲ့တဲ့(ဒိုင်ဖဲထားခဲ့တဲ့) တပ်ရင်း ၁ နဲ့၃ က ပါ တောခိုတော့ဒိုင်လျော်ရမှာ သေချာနေတာပေါ့ ။ ဒီအခြေအနေကနေ ဒိုင်စားတဲ့ပွဲ ဖြစ်အောင်ပြန်ဖန်တီးယူတဲ့ အခါမှာ အရပ်ဘက်မှာ ရုပ်ပြကောင်းတဲ့ဦး နု ၊ တပ်ဘက်မှာရုပ်ပြကောင်း တဲ့ဦးနေ၀င်း ၊ စီမံတတ်တဲ့ဦးဗဆွေ ၊ တပ်ဘက်က ဗိုလ်မောင်မောင် ၊ဒီလို ရှိခဲ့တာမှာ အင်္ဂလိပ်လက်ထဲက ပါလာတဲ့စည်းကမ်းတွေ နည်းလမ်းတွေ နဲ့ လုပ်မရတော့အဲဒါတွေကို ဖေါက်ဖျက်ရတဲ့ကိစ္စတွေ တပ်ျွာရော အရပ်ဘက်မှာပါ အများကြီး ဖြစ်လာပါယ်။ ဒီလို စည်းကမ်းတွေမ ဖေါက်ဘဲ စာအုပ်င်္ကြီးအတိုင်းလုပ်နေလဲ ရန်ကုန်ကျမှာကိုး ။ ဒီလိုစည်းကမ်းတွေဖေါက်တာမှာ ခေါင်းခံမဲ့နာမည်ခံမဲ့ သူကို အများရွေးကြတဲ့အခါမှာ အဲအချိန်ကပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်းဟာ ခေါင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ မြင်ပါတယ်
6 minutes ago· Like
ဥပမာ စစ်ရဲ ၄ ရဲ့ အရံ ၂၂ခွဲ ထိ ရှိခဲ့အေယူအမ်ပိကို ဖွဲ့ တာက အများသဘောတူ ( ဦးဗဆွေ အိမ်မှာ မိတင်းလုပ် ၊ ဗိုလ်မောင်မောင် ၊ ဗိုလ်အောင်ကြီးဗိုလ်မှူးထွန်းတင် ၊ ရန်ကုန်ဘဆွေပါ ၊ တပ်တွေ စောမြသန္တာ ဖြစ်တော့ ပြည်ထဲရေး လက်အောက်ခံဆိုတော့ဦးကျော်ငြိမ်းတပ်တွေ သောက်ရမ်းလုပ်တယ်လို့ နာမည်ထွက် ၊ ထို့ အတူပါဘဲ တောခို တဲ့ သူတွေ ရဲ့ မြို့ ပေါ်ကျန်ခဲ့တဲ့အနွယ်တွေကို ပုဒ်မ ၅ နဲ့ ဖမ်းဘို့ ဆုံးဖြတ်တော့အင်နား ဆိုင်ကယ် ၊ အမိန့် ထုတ်ရတာ ပြည်ထဲရေး ဦးကျော်ငြိမ်း ။ ဖမ်းတဲ့ သူတွေကဖဆပလထဲက လူစုံ ။ အဖမ်းခံရသူတွေက တကယ် မြေအောက် လုပ်သူတွေလဲ ပါ သောက်ညင်ကပ် ပုဒ်မနဲ့ယော ဓေါရှိတာ လဲပါ ။ အဲမှာ နာမည်ခံက ဦးကျော်ငြိမ်းဘဲ
Tint Oo · Friends with NawKoand 1 other
ဒီအခြေအနေကဆက်သွားနေသမျှ အလုပ်က ဖြစ်နေမှာဘဲ ၊ နောက်က ဒိုင်ခံ စည်းရုံးရေးကိုင်နေတဲ့ ဦးဗဆွေ ရှေ့ က မင်းသား ရုပ် ဦး နု ၊ ဟိုဘက်က လူကြမ်း ဖြဲခြောက်မဲ့ ဥိးကျော်ငြိမ်း ဟန်ကို ကျလို့။ ဒီတိုင်း လေး နေရင် အိုကေနေတာါဘဲ ။ သို့ သော် ခက်တာက နဲနဲ လေးအသားကျလာတော့ အာဏာ နဲ့ တွဲ လျက် ဒကာတွေ ပါလာတော့ သူ့ ပရိဿတ် နဲ့ သူ ရှိလာတာ ပြဿနာ လို့ မြင်ပါတယ် ။ အဲ တင် အဝေမတည့်ကြတော့ဘဲ တပည့်ချင်း ဘေကြရာက ခွေးချင်းကိုက်ရာကကလေးချင်း၇ိုက်ပြီးနောက်ဆုံး လူကြီးချင်း လူသတ်မှု ဖြစ်တဲ့၅၈ကို ရောက်ရတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်
Tint Oo· Friends with Naw Koand 1 other
အဲံမှာဘာဖြစ်လာလဲ ဆိုတော့ ၄၈-၅၈ မှာ စည်းကမ်း နဲ့ မညီခဲ့ တာတွေ တဘက် နဲ့တဘက် လွှဲချတဲ့ပြဿနာ ပေါ်လာတယ် ။ အဓိက ခိုးထုပ်ခိုးထည်နဲ့ မိနေတာက စစ်တပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ၄၈ ကနေစပြီး စည်းကမ်းနဲ့ လုပ်မရလို့ ဖြစ်သလို လုပ်ကြတော့ ၅၈မှာ တပ်တွေကိုက တရားမ၀င်တပ်တွေ ရှိနေတယ် ပြည်စောင့်တပ် ၊ ပျူစောထီး ၊ အရံစစ်ရဲ ၊စစ်ဝန်ထမ်းဆိုတာတွေကရှိနေတုန်း ၊ တပ်မင်းလောက်ထိကိုစာရင်းကိုက်အင်းကိုက်မရှိသေးဘူး။ အဲကို ဦးနုက သူ့ နိုင်ငံရေး တွက်ကိန်း နဲ့ သူ အကုန် စည်းကမ်းတကျ လုပ်မယ်ဆို လေသံလွှင့်တာ မှာ လက်သံပြောင်တဲ့ဗိုလ်မောင်မောင်နဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးတော့ဘဲ။ အဲ ၆၂ကတော့ ပြောရရင် အနီးဆုံး ဥပမာက အိမ်ဘေးကအပျိုကြီးကိုရှိန်လို့လက်ရှောင်နေရာက တရက် အရက်မူးမူး နဲ့နှိုက်လို့တကြိမ်ရမိတော့ နောက်တခါကျတော့ မထူးပါဘူးကွာဆို ကောက်ယူလိုက်တဲ့ အပေါက်လို့ မြင်မိပါခင်ဗျာ
ခုဖြစ်နေတာကလဲ ဒေါ်စုဟာ အပျိုကြီး ကို ပြန်ရှိန်အောင် အပျို့သိက္ခါ နဲ့နေတတ်အောင်မသင်ဘဲ ဟိုဘက်က အရက်သမားလေးကို ဟင်းဟင်း နင်နော် ငါ့ လူလစ်ရင် လာမဆွဲ နဲ့ငါအော် ထည့်မျာနော် ဟင့်ဟင့်ေုပာနေတာ ရ၀ူးလားလို့ဟိုဘက်က မာမူ နဲ့ တိုင်ရိုက်မား ။ ဆိုတဲ့ အချိုးက မတက်သေးလိူ့မြင်မိပါခင်ဗျား လေးစားစွာဖြင့်